चुनाव हारेपछि पर्सामा नेताहरुबीच नै कुटाकुट ! माओवादीले धोका दिएपछि एमाले पराजित | suryakhabar.com
Home राजनीति चुनाव हारेपछि पर्सामा नेताहरुबीच नै कुटाकुट ! माओवादीले धोका दिएपछि एमाले पराजित
चुनाव हारेपछि पर्सामा नेताहरुबीच नै कुटाकुट ! माओवादीले धोका दिएपछि एमाले पराजित
on: ९ पुष २०७४, आईतवार १०:३२ In: राजनीतिTags: चुनाव हारेपछि पर्सामा नेताहरुबीच नै कुटाकुट ! माओवादीले धोका दिएपछि एमाले पराजितNo Comments
पर्सा । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरुबीच कचिलो शुरु भएको छ । चुनावमा अन्र्तघात मुख्य कारण भएको भन्दै नेताहरुले आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । दोस्रो संविधानसभामा पर्सा ५ क्षेत्र थियो र एमालेले तीन तथा कांग्रेसले दुई क्षेत्र जितेको छ । तर, अहिले जिलमा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ र तीन क्षेत्र राजपाले जित्दा एउटामा राजपा विजयी भएका छन् ।
चुनावको परिणाम आएपछि पर्साका काँग्रेसका कार्यकर्ता तथा नेताहरुबीच मनमुटाव बढेको छ । सार्वजनिक रुपमै उनीहरुले एक अर्काको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
चुनावको समिक्षा गर्न कांग्रेस जिल्ला पर्सा सम्पर्क कार्यालय वीरगञ्जमा डाकिएको बैठकमा नेताहरुबीच कुटाकुट भएको छ । क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति अरबिन्द कुमार गुप्तालाई युवा नेता ईम्तीयाज आलमका सर्मथकहरुले कुटेका हुन् । स्रोतकाअनुसार उनीहरुबीच कार्यक्रमको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
केहिदिन अघि भएको क्षेत्र नं ३ को भेलाले पार्टीका नेताहरुको असहयोगका कारण हार ब्यहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता नेताहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । निर्वाचनमा पार्टी हित विपरित काम गर्ने भन्दै माओवादीले दुई नेतामाथि कारबाही गरेको छ ।
निर्वाचनमा पार्टीलाई असहयोग गरेको र पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै नेता जालिम मियाँ र बाबुराम कौशिकलाई माओवादी पर्साले कारवाही गरेको हो । क्षेत्र नम्बर ४ मा उम्मेदवार बनेकी उर्मिला अर्याललाई असयोग गरेको आरोपमा दुबै नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको हो ।
मियाँ जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख हुन् भने कौशिक पूर्व जिल्ला संयोजक हुन् ।
त्यस्तै एमालेभित्र पनि किचलो सुरु भएको छ । कतिपय स्थानमा सही उम्मेदवार दिन नसकेको र कतिपय स्थानमा पार्टी भित्रैबाट अन्र्तघात भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
गठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्रले असहयोग गरेको आरोप एमालेका नेता कार्यकर्ताले लगाएका छन् ।
Tags: चुनाव हारेपछि पर्सामा नेताहरुबीच नै कुटाकुट ! माओवादीले धोका दिएपछि एमाले पराजित
नवराज सिलवाल पक्राउ पर्ने निश्चित ! अब के प्रतिक्रिया देला एमालेले ?
९ पुष २०७४, आईतवार १०:३२